Dhagaa tokkoon shimbira Afur. Weellistoota Urjii sabaa wajjiin booharuu. Finfinneee gubbaatti - Kichuu
[ August 11, 2020 ] Ethiopia Holding Kenyan Journalist Despite Court Ordered Release	World
[ August 11, 2020 ] There is no rule of law in Ethiopia !!	Africa
[ August 11, 2020 ] Ummanni Walaayitaa sirna nama nyaataa #Abiyyi Ahmad Bilxiginnaa irratti qabsoo finiinsaa jira!	News
[ August 11, 2020 ] Odeefano ijoo fi Nafxanyaan eenyu/ maali?	Videos
[ August 11, 2020 ] Ibsi Maqaa ABOn Hoteela Hilton keessatti kenname beekamtii Hoggaanaa Dhaabichaan ala jedhame.	News
[ August 11, 2020 ] Siyaasa Itoophiyaa: ABOn lamatti qoodamaa jiraa?	News
[ August 11, 2020 ] ABOn miseensota GS gidduu kana seera dhaabichaan ala socho’an irratti tarkaanfii fudhate.	News
HomeMusicsDhagaa tokkoon shimbira Afur. Weellistoota Urjii sabaa wajjiin booharuu. Finfinneee gubbaatti
Dhagaa tokkoon shimbira Afur. Weellistoota Urjii sabaa wajjiin booharuu. Finfinneee gubbaatti
Dhagaa tokkoon shimbira Afur. Weellistoota Urjii sabaa wajjiin booharuu.
Finfinneee gubbaatti Sabboonummaa Calaqqisiisuu
Oromoota Walloo Shira Diinaatiin buqqa’an deebisanii dhaabuu.
4ffaa isiniif dhiisa.
konsertiin deeggarsa walloo eessarraa gahee jira
Haagayu Dr. Guutuu Tessoo
ኦነግ የዋና ጽህፈት ቤቱን “ሕገ -ወጥ ብርበራ” ምርጫ ቦርድ እንዲመረምር ጠየቀ
Abiy’s PP: The ideological fight have gone to another level.